Wholesale Portable Inflatable Simuka Paddle Board yevakuru SUP ine bhegi rekuchengetedza Manufacture and Factory |XGEAR
Inotakurika Inflatable Simuka Paddle Board yevakuru SUP ine bhegi rekuchengetera
XGEAR 10'6 ″ Inflatable Stand Up Paddle Board ine 3 Fins, iyo nyowani yeultralight kuvaka ine dual layer 6” ukobvu PVC iyo yakatsiga kupfuura mamwe akajairwa 4” & 5” simuka paddle board.Iyo yakasarudzika dhizaini uye isiri-inotsvedza grip yedu yekumira-up paddleboards inovimbisa kusimba kwakanaka.Iyo yakawedzera yakafara ne 32 ″ ndeyekumira kuri nani.
XGEAR inotakurika ISUP ine bhegi rekuchengetedza yakanakira ese hunyanzvi mazinga uye yakakwana munzvimbo zhinji dzemvura.
Nguva Yekutungamira:40 ZUVA
● XGEAR inflatable sup ndeye 10' 6''kureba, uye isu takavandudza kumira kwakasimba uye kuenzanisa ne 32'' yehupamhi hwedhiki.Huremu i19.8Ibs uye huremu hunotsigirwa hunosvika 300Ibs.
● XGEAR lightweight inflatable stand up paddle board yakagadzirwa ne high pressure double wall drop stitch material (Max 1 bar kana 14.5Psi) inova yemhando yepamusoro yezvigadzirwa zvemauto.Brushed thickening simuka paddling board ine Non-Slip EVA furo, yakanakira ese hunyanzvi mazinga uye hupamhi hwepamusoro kudzivirira iwe kuwira mumvura.
● Pombi ine geji.Iyo sup paddle board ine 3 fins inopa yakanyanya kugadzikana uye maneuverability, hazvidi chishandiso chekuisa zvimbi.
● Yedu inflatable sup board ine D-zvindori zvekuchengetedza leash, elastic tambo kana chigaro cheKayak.Inosanganisirawo nyaradzo dema diamond groove traction pad.
Main Material New Ultra-chivakwa chakareruka chine mbiri mbiri PVC6''ukobvu
Yakakurudzirwa kushanda psi 15psi
Max huremu huwandu 300lbs
Item Dimensions L126 x W32 x H6inches
Saizi yemukati mebhokisi (saizi yekupeta) L33.9 x W15.75 x H9.85 inches
Item Weight 13.5KG
Carton size L34x W16 x H12 inches (1pcs/bhokisi)
CartonGros Weight 14KG
Ongorora: Sezvo zvigadzirwa zvichigara zvichigadziridzwa, ndapota taura nesu kuti tizive zvichangoburwa.
Tanowanika ruvara rwemhando ina:
XGEAR ISUP ine yakazara paddleboard accessories, izvi zvakakosha zvekukwasha sezviri pazasi:
1. Inflatable Stand Up Paddle Board;
2. Yakakwidziridzwa inogadziriswa aluminium paddle;
3. Manual pombi yemhepo;
4. Bhegi rekuchengetedza- bhegi rekutanga;
5. Fin/ skeg yekuronda;
6. Kugadzirisa kit;
7. Kuchengetedza / Kayak paddle leash.
Nzira yekugadzira chigadzirwa:
1. Bvisa bhodhi rakapetwa uye uise panzvimbo yakatsetseka uye uipete.
2. Zvadaro shongedza iyo huru fin.
3. Iva nechokwadi chokuti chivharo chevhavha chiri panzvimbo yakarurama - "kumusoro uye kuvhara".
4. Ingobatanidza valve uye pombi, uye inflate kusvikira kudzvinyirira kwakanyanya kwasvika.
Nzira yekubvisa uye kurongedza:
1. Enda nayo kunzvimbo yakati sandara uye yeuka kuve nechokwadi kuti paddle board yakachena uye yakaoma.
2. Dzvanya uye shandura chivharo chevhavha 1/4 shandura clockwise kuti usunungure mweya
3. Bvisa fin hombe
4. Peta sup board kubva mumhino uye ramba uchisundira kunze mhepo uchikunguruka
5. Chengetedza bhodhi rakapetwa mubhegi.
Iyi stand up paddle board inotakurika kuchengeta uye kutakura, inogona kupetwa kuti ifambe nyore, yakasvibiswa uye kuiswa mubhegi.Paunosvika kwauri kuenda, unogona kukurumidza kupinza bhodhi rako nepombi uye wopinda mumvura ipapo ipapo.
Inokodzera munzvimbo dzakawanda dzemvura.Zvakadai seseashore surfing, snorkeling, ro mudhamu, kurara, yoga, kubata hove, kushanya uye zvichingodaro.XGEAR yakasarudzika dhizaini ine isiri-inotsvedza grip inochengetedza kuchengetedzeka uye kusimba, saka yakakwana kune ese hunyanzvi mazinga uye mamiriro.
Zvakapfuura: XGEAR Pop Up Nyore Isa 6 padivi Hub Screen Imba / Canopy
Zvinotevera: Kutengesa Kunopisa kweChimiro Chitsva Hondo Rope yeSimba uye Core Kudzidziswa
Camouflage Low Back Folding Boat Seat yeKuredza
Inotakurika Folding Deck Chair ine Aluminium Frame...
High Back Boat Seat ine Folding Function yeB...
Yakakwira Kumashure Kupeta Boat Chigaro cheKuredza uye Boa...
Low Back Hove Boat Seat ine Fold-Down Basa
Foldable Low Back Boat Seat yeHove uye Boa...